Waxaan ku soo bandhigi karnaa midhaha midabada leh ee nacnaca gummy, iyo sidoo kale, nacnaca la habeeyay waa la aqbalay. Waxaan nahay soo saare asal ah oo leh warshad gaar ah, oo bixinaysa qiimaha ugu jaban ee warshad iyo tayada ugu fiican. Nacnaca gummy waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceyriinkiisu yahay carrageenan, sharoobada maltose, xylitol, budada miraha loo habeeyay, iyo cunno kale oo dheeri ah. Waxaan soo bandhigi karnaa qaabka qaabka orso, moodooyinka kale ee qaababka ah waa la habeeyay, lana sameeyay 20 maalmood. Ilaa hadda, midabada cherry cas, liin jaalle, cagaaran tufaax, buluug, iyo guduud waa ...